Kuvandudzwa kweMitemo Kotsviriridza muZimbabwe
Nyika yakatambira bumbiro remitemo idzva munaChivabvu wegore rino
WASHINGTON DC — Mukokeri wenhengo dzeMDC T muparamende, VaInnocent Gonese, vanoti ivo pachavo vari kuita zvakawanda chose muparamende mukuyedza kuvandudza mitemo yenyika kuitira kuti ifambirane nebumbiro idzva remitemo yenyika.
Mashoko aVaGonese anotevera mashoko akaburitswa neNewsDay mushure mekutaura nevaive masachigaro ekomiti yeparamende yaitungamira kunyorwa kwebumbiro idzva, VaMunyaradzi Mangwana veZanu PF, naVaEdward Mkhosi veMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube.
Vaviri ava vanoti vanofunga kuti vakapotsa pakusatara nguva yekuti mitemo iyi inge yavandudzwa, sezvo hurumende isiri kutirimuka.
Kunonoka kwehurumende kuvandudza mimwe mitemo iyi kuitira kuti ifambidzane nebumbiro idzva remitemo yenyika kunonzi kuri kukonzera kusajeka nekusanzwisisika kwemitemo inofanirwa kuteverwa munyika.
Izvi zvinonzi zvatadzisawo kushanda kwemamwe makomisheni ayo anonzi anofanirwa kutanga atsigirwa nemitemo mitsva iri mubumbiro idzva.
Mimwe mitemo inonzi inofanirwa kuvandudzwa nechimbichimbi inonzi inosanganisira Provincial Councils Act, Criminal Procedure and Evidence Act, iyo inobata nyaya dzekutongerwa rufu, pamwe neWar Veterans Act.
Vamwe vari kuti nhengo dzedare reparamende ndidzo dzisiri kuita basa.
Asi VaGonese vanoti sevadare, vari kumirira kuti makurukota atange matanho acho ivo vozotsigira.
Asi vanoti zvinodawo futi kuti hurumende iratidze chido chekuti mitemo iyi ibatanidzwe, izvo zvisiri kuonekwa panguva ino.
Asi mukokeri weZanu PF muparamende, VaJoram Gumbo, vanoti hurumende yakatotanga kare kuvandudza pamwe nekubatanidza mitemo iyi sezviri kunekwa nekuvepo kwebazi remuchuchisi mukuru wenyika, prosecutor general.
VaGumbo vanoti sezvo mitemo inoda kutariswa ichidarika mazana maviri nemakumi masere, zvichatora nguva kuti yose ibatanidzwe kana kuvandudzwa kuti ifambidzane nebumbiro idzva.
Hurukuro naVaJorum Gumbo